ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်သံကိုရပ်တန့်မရအောင် ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ဟန်သာဇေရဲ့ အိပ်ယာထက်က အလန်းစားပုံရိပ်လေးများ – Shwe Yoe
ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်သံကိုရပ်တန့်မရအောင် ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ဟန်သာဇေရဲ့ အိပ်ယာထက်က အလန်းစားပုံရိပ်လေးများ
မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဟန်သာဇေ ကို သိကြ မယ် ထင်ပါတယ် နော် … . ။ မော်ဒယ်လ် လောက ကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ်ပါ တယ် ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝန်းရံ အား ပေး မှုရ ရှိထားတဲ့ သူမ က တော့ ဆိုရှယ် media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ် … . ။
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက် ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာ မှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။
ပုံလေးတွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ်လ် ဟန်သာဇေ တစ် ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေတာ လည်းဖြစ် ပါတယ် … . ။ သူမ က တော့ ခပ်ချေချ ရိုက်ထား တဲ့ ပုံလေးကို တင်ပေးလာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ် … . ၊၊ မော်ဒယ်လ် ဟန်သာဇေ ရဲ့ အလှပုံရိပ် လေးတွေကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်တယ် နော်
photo : Han Thar Zay
အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင် ညှို့အားပြင်းနေတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ ဗီဒီယို
အချစ် နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ သူမရဲ့ အားသာချက်တွေ ကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီ
စွဲမက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ အလှတရားတွေပေါ်လွင်နေပြီး ဆက်ဆီ ကျကျ လှလွန်းနေတဲ့ နန်းမွေစံ
လုံးတင်းနေတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေပေါ်လွင်အောင် ​နောက်ကျောဘက်ကို ဦးစားပေး ရိုက်ပြလိုက်တဲ့ ခင်လွှမ်း